Xinhua Myanmar - Terms
ဆင်ဟွာ သတင်းဌာန မြန်မာဘာသာ Online မီဒီယာ ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များကို သီးသန့် ဖတ်ရှုလိုသူ၊ ကြည့်ရှုလိုသူ နှင့် အသုံးပြုလိုသူများ အတွက် ဆင်ဟွာ မြန်မာဘာသာ သတင်း စာသား အချက်အလက်၊ ရုပ်သံ နှင့် ဓာတ်ပုံ များကို သီးသန့်ပေးပို့ခြင်း ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်း မှ တဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆင်ဟွာ သတင်းဌာန၏ မြန်မာဘာသာ Online မီဒီယာ တွင် ကြော်ငြာ ထည်းသွင်းရန် အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကြော်ငြာရှင်များသည် မိမိ ထည့်သွင်းသည့် စာသားအချက်အလက်၊ ရုပ်သံ နှင့် ဓာတ်ပုံ များသည် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဉာဏဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေများကို အပြည့်အဝ လိုက်နာကြောင်း ကြော်ငြာရှင်များ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
Xinhua News Agency's Myanmar language new media platform (Online Media) would sincerely like to provide readers, audiences and users special services.
The contents of the advertisement shall conform to Myanmar' law, rules and regulations, culture, religion and customs as well as international rules generally applied.
Advertisers shall bear the full responsibility of their contents.